Raadreeb | Author Archives | 27
Home » Entries posted by Mr Sayid (Page 27)
Entries posted by Editor
Baaritaan heer sare ah ha lagu sameeyo dadkii masaajidda lagu laayay.
March 25, 2019 Comments Off on Baaritaan heer sare ah ha lagu sameeyo dadkii masaajidda lagu laayay.
Ra’iisulwasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa amartay in baaritaan heer sare ah lagu sameeyo weerar ka dhacay magaalada Christchurch ee lagu laayay 50 ruux ee Muslimiinta ah ee salaadda Jimcaha ku tukanayay labada masaajid. Waxay sheegtay in guddi khaas ah ay baaritaan ku samayn doonaan bal in booliiska iyo sirdoonku ay samayn kareen dadaal intan […]
Madaxweynaha Puntland oo Daah-Furay Mashruuc Qaliin Loogu Samaynaayo Dadka Faruuran.
March 24, 2019 Comments Off on Madaxweynaha Puntland oo Daah-Furay Mashruuc Qaliin Loogu Samaynaayo Dadka Faruuran.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa cisbitaalka magaalada Garoowe ka daah-furay Mashruuc balaaran oo Qaliin loogu samaynaayo dadka faruuran iyo dadka dhabxanaggu xidhan yahay. Munaasabadda furitaanka mashruuca waxaa Madaxweynaha ku wehelinaayey Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan, xildhibaano ka tirsan Golaha Wakiillada Puntland, masuuliyiinta cisbitaalka Garoowe, Jaaliyadda Puntland ee dalka Germany […]
Wasiirkii Warfaafinta Somaliland oo Hargaysa lagu xirey.
March 24, 2019 Comments Off on Wasiirkii Warfaafinta Somaliland oo Hargaysa lagu xirey.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi lagu xiray wasiirkii Warfaafinta ee maamulkaasi. Ciidamada Booliska ayaa xabsiga u taxaabay Cabdiraxmaan Guribarwaaqo oo eedaymo musuqmaasuq oo loo haysto. Wasiirka ayaa lagu wadaa in maanta oo Axad ah uu ka soo muuqdo maxkamada Hargeysa. Xeer ilaaliyaha guud ee […]
Madaxweynaha Jubbaland oo magacaabay Guddiga Madaxbanaan ee Xuduudaha iyo Doorashooyinka.
March 24, 2019 Comments Off on Madaxweynaha Jubbaland oo magacaabay Guddiga Madaxbanaan ee Xuduudaha iyo Doorashooyinka.
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa magacaabay guddiga madaxa banaan Xaduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland, kuwaas oo ka kooban 7 Xubnood. Wareegto kasoo baxday Xafiiska Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa lagu sheegay in Guddiga la Magacaabay markii la arkay baahida loo qabo guddi madax banaan oo maareeya xaduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland. Maamul Goboleedka Jubbaland ayaa […]
Madaxweyne Deni Oo Talis Boolis Gobolka Bari u Magacaabay.
March 23, 2019 Comments Off on Madaxweyne Deni Oo Talis Boolis Gobolka Bari u Magacaabay.
Gaashaanle Sare Xuseen Cali Maxamed oo Taliye u ahaa Ciidamada Bangiga dhexe ee Boosaso ayaa muddo kadib loo magacaabay Taliyaha Qeybta Booliska ee Gobolka Bari, markii Taliyihii hore ee Booliska Gobolka uu ka mid noqday Xildhibaanada Baarlamanka Puntland, Isagoon Xilka iska casilin. Sido kale Madaxweynaha Puntland ayaa G/dhexe Cabdirashiid Barre Maxamed u magacaabay Taliye ku […]
Soomaaliya oo ka Aamustay Codayn looga soo horjeeday go’aankii Trump ee Golan- Heigths.
March 23, 2019 Comments Off on Soomaaliya oo ka Aamustay Codayn looga soo horjeeday go’aankii Trump ee Golan- Heigths.
Ergada Guddiga Qaramada Midoobay u Qaabilsan Xuquuqda Aadanaha ee dowlada Soomaaliya ayaa ka aamustay codeyn guddigaasi uu ku cambaareynayay qorshaha Maraykanka uu ugu aqoonsanayo Buuraha Golan Heights in ay leedahay Israel. Codeyntan oo dhacday maalin kadib markii uu Trump sheegay in la gaaray xilligii uu Maraykanku u aqoonsan lahaa Golan Heights inay tahay hanti ay […]
Qaraxyo iyo Weeraro Muqdisho ka dhacay.
March 23, 2019 Comments Off on Qaraxyo iyo Weeraro Muqdisho ka dhacay.
Goordhow waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxyo si weyn looga maqlay guud ahaan caasimada. Qaraxyada ayaa ahaa ilaa labo qarax oo loo adeegsaday gawaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa. Qaraxyada ayaa lagu weeraray xarunta Wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo ku taala isgooyska Jubba ee Muqdisho. Sidoo kale rasaas ayaa laga maqlayaa halka ay qaraxyada ka […]
Soomaaliya oo kamid noqotay gollaha ku cambaareeyay Israil heysashada buuraha Gollan.
March 23, 2019 Comments Off on Soomaaliya oo kamid noqotay gollaha ku cambaareeyay Israil heysashada buuraha Gollan.
Gollaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramadda Midoobay ayaa si aqlabiyad ah ugu codeeyay in Israil lagu cambaareeyo inay xoog ku heysato buuraha Golan ee Suuriya leedahay. Buurahan ayaa Israil ay ka qabsatay Suuriya intii uu socday dagaalkiii lixda maalin qaatay ee dhacay sanadkii 1967. Codbixinta ayaa kusoo beegmatay maalin uun kaddib markii madaxweyne Trump uu sheegay […]
Kenya oo sheeganaysa kheyraadka ku jira badda dacwada ka taal ICJ in wabiyadeeda ka yimaadaan.
March 22, 2019 Comments Off on Kenya oo sheeganaysa kheyraadka ku jira badda dacwada ka taal ICJ in wabiyadeeda ka yimaadaan.
Kadib markii dowlada Kenya ay ku qanacday inaysan dowlada Soomaaliya diyaar u ahayn in lagu xaliyo wadahadal muranka ku saabsan lahaanshaha dhul badeedka ay dacwadiisu taal Maxkamada ICJ ayay bilowday in ay diyaariso dukuminti kahor bisha September oo loo ballansan yahay maxkamada. Kenya ayaa hore ugu dooday in maxkamad Caalamiga ah ee ICJ aysan awood […]
Galmudug oo ka jawaabtay hadalkii ka soo yeeray Wasiirka arrimaha Gudaha dowladda federaalka.
March 22, 2019 Comments Off on Galmudug oo ka jawaabtay hadalkii ka soo yeeray Wasiirka arrimaha Gudaha dowladda federaalka.
Waxaa muuqanaya khilaaf mar kale soo kala dhaxgalay dowladda dhexe iyo maamul gobolleedka Galmudug, kaddib war ay dhawaan soo saartay wasaarrada arrimaha gudaha dowladda federaalka Cabdi Maxamed Sabriye oo sheegay in doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug la qabanayo bisha July ee sanadkan. Wasiirka Tamarta iyo Biyaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Shire Maxamed ayaa sheegay in Galmudug […]
Page 27 of 68« First‹ Previous2526272829Next ›Last »